China Single spindle CNC pfuti yekuchera muchina fekitori uye vagadziri |Deshen
Michina yekuchera yakadzika Gomba
Horizontal Pfuti Drilling Machine
Mirco hole pfuti yekuchera muchina
Single spindle CNC pfuti yekuchera muchina
Kaviri spindle CNC pfuti yekuchera muchina
Ina spindle CNC pfuti yekuchera muchina
3 Axis Yakadzika Gomba Drilling Machine
3 Axis CNC Yakadzika Gomba Pfuti Drilling Machine
Yakasanganiswa BTA Uye Pfuti Drilling Machine
BTA Yakadzika Gomba Drilling Uye Boring Machine
T2120G BTA Yakadzika Gomba Kuchera Uye Kubhowa Muchina
T2250A BTA Yakadzika Gomba Kuchera Uye Kubhowa Muchina
TK2125 BTA Yakadzika Gomba Kuchera Uye Kubhowa Muchina
TK2180 T2250A BTA Yakadzika Gomba Kuchera Uye Muchina Unobhowa
Round Bar Yakagadzirirwa Deep Gole Drilling Machines
Deep Hole Pfuti inoboora
Solid Carbide Pfuti Drills
Nhanho Indexable Pfuti Drills
Pfuti Drill Bush Uye Mutungamiri
Type:pfuti drill bit
Surface quality :high quality
Sample order:hongu bvuma
Non standard:Hongu bvuma
Carbide tip brazed single nyere Gundrilling bit simbi kuchera Deep Hole Gundrilling carbide pfuti Drill Bit
Iyi modhi ndiyo inonyanya kufarirwa modhi.
Pfuti yekuchera range Φ4～Φ20mm/Φ4～Φ30mm/Φ6～Φ40mm
Pfuti kuchera kunonyanyisa kudzika 500/1000/1500/2000/2500 mm
Gomba rinonyanya kureba uye dhayamita reshiyo 100:1
OD basa renji Φ15～Φ100mm
Pfuti yekuchera nzira single spindle, inokodzera shaft kana round bar basa.
Headstock Dhiraivha basa richitenderera, rinoenderana nekumhanya 117r/min
CNC controller system SIEMENS/FANUC/GSK
Njanji inotungamira inotora njanji inotungamira njanji
Gomba kuchera dhayamita siyana
Max.gun drilling urefu
Main spindle uwandu
Main spindle nzvimbo
Main mota simba
Maxiumum inotenderera kumhanya
Infeed speed range
Infeed motor torque
Hukuru hwegomba huchokwadi
Basa rakagadziriswa: 1mm/1000mm, Basa rekuita: 0.5mm/1000mm.
Machine general simba
Zvakapfuura: Mirco hole pfuti yekuchera muchina
Zvinotevera: Kaviri spindle CNC pfuti yekuchera muchina
sei kusarudza isu?
1.Quality control: zvese zvishandiso zvedu zviri kuburikidza nekunyatso bvunzo tisati tatumirwa.isu tine gumi seti yekuyedza muchina.
2.Mutengo wekugadzira: Isu tinogadzira, mutengo wese mutengo wefekitari, mutengo wemakwikwi
3.Kurumidza pindura: Kubvunza kwako kwakabatana nemidziyo yedu, tichakupindura mukati memaawa makumi maviri nemana.
4. OEM & ODM yakagamuchirwa: Tinogona kugadzira maturusi maererano nekudhirowa kwako.
5.Kudzivirira nzvimbo yako yekutengesa, pfungwa dzekugadzira uye ruzivo rwako rwese zvakavanzika.
6.Gun drill service ndiyo yakanakisisa
Zano dhayamita(mm) Carbide kureba(mm) Hurefu hwekukuya(mm) Kushivirira(mm)
10.02 37.8 34 ±1
11.02 37.8 34 ±1
11.52 37.8 32 ±1
12.02 37.8 33 ±1
12.52 37.8 33 ±1
13.02 37.8 32 ±1
14.02 42.5 36 ±2
15.02 48.6 38 ±2
16.02 48.6 38 ±2
17.02 47.8 36 ±2
18.02 47.8 34 ±2
19.02 47.8 34 ±2
20.02 47.8 33 ±2
21.02 56.5 44 ±3
22.02 58.8 45 ±3
23.02 58.8 45 ±3
25.02 61.8 45 ±3
26.02 62.6 45 ±3
1. Isu tiri Kubatanidzwa kweIndasitiri uye Kutengeserana kugadzira tungsten carbide series product,Widest product range, Best production capability, Best quality control, Best Service, Competitive price;
2. 100% QC yekuongorora isati yatumirwa;
3.Feedback mukati maawa 24 uye Yakanaka Chirungu Kukurukurirana;
4.Kudzidziswa kwakanaka kwekutengesa kutengesa kunogona kupa mazano enyanzvi pane chigadzirwa;
5.Customized kugadzira maererano nemapepa ako ekudhirowa;
6.Gamuchira kurongeka kwekutongwa uye kurongeka kudiki;
7.Gamuchira mazwi ose ekubhadhara eT / T, L/C, western union, Paypal,Trade Assurance, nezvimwewo;
8.Kupa sampuli dzemahara pasi pemamiriro ekutakura akabhadharwa nemutengi;
9.Survey Email yezvigadzirwa zvekushandisa ichatumirwa panguva yekuteerera mhinduro yako, chinangwa chedu chiri kuedza kuita kuti mutengi wese agutsikane uye isu mativi maviri WIN-WIN!
Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd inogadzira uye inotumira kunze kwemidziyo yakadzika gomba yekucheka maturusi anosanganisira zvibooreso zvepfuti, zvinopfutidza pfuti, BTA, Trepanning, maturusi anofinha, maturusi okukudza nezvimwe, pamwe nemidziyo yekushandisa.Isu tinogoverawo mafuta ekucheka, cutter grinder, mafuta ekupfapfaidza pombi yakazara pamunda wakadzika gomba rekuchera.Isu tiri kuita zvekugadzira zvigadzirwa tichiteerana nemhando dzepasirese dzemhando yepamusoro nekumisikidzwa kwakanakisa kuti tipe chibereko chakanakisa uye mhando kune vatengi.Takatanga mugore ra2010, takabata zvakasimba mumusika wepamba uye takawanawo vatengi vakawanda muSouth East Asia. , Europe uye nevamwe.Isu tiri One-Stop mhinduro inopa maturusi akadzika gomba rekucheka maturusi.Kuwedzera kune izvi, isu tiri mutengesi weTungsten Carbide Tips & Rods uye zvimwe zvigadzirwa kubva kuEurope neUSA.
Q1: Chii chinonzi Warranty ye tungsten carbide zvigadzirwa?
A1: Isu tine yakakwira yakanyatso giredhi muchina wekutonga geometry zviyero uye kushandisa Ultra yakanaka saizi saizi substrate yakavharwa nehupamhi hwekuita coatings kuvimbisa hupenyu hwezvigadzirwa zvedu, izvo zvinogona kugutsa mamiriro ese ekushanda.Kana chero matambudziko emhando parutivi rwedu akaitika munguva ino. , tichatora mutengo wekutumira uye kutsiva.
Q2: Unopa sampuli dzemahara here?
A2: Hongu, kazhinji isu tinopa emahara masampuli ekuyedzwa pasi pemamiriro ekutakura anobhadharwa nemutengi.
Q3: Ndeipi yako shoma yekuodha chinodiwa?
A3: Isu ticharatidza iyo MOQ yechinhu chimwe nechimwe chiri mupepa rekotesheni.Isu tinobvuma muenzaniso uye kurongeka kwekuyedza.Kana huwandu hwechinhu chimwe chete husingakwanise kusvika kuMOQ, mutengo unofanirwa kuve wemuenzaniso mutengo.
Q4: Ndeipi nguva yekutumira yezvigadzirwa zvako?
A4: Inoenderana nekuwanikwa kwezvinyorwa.Kana zvinhu zvinodiwa zviri muzvitoro, nguva yekuendesa ingave iri mukati memazuva ekushanda kwe8, asi kana isiri iyo nguva yekuendesa ingave yakapoteredza 20 mazuva ekushanda.
Q5: Unogona kugadzira carbide Special-shaped products?
A5: Hongu, tinogona.Isu tinokwanisa kugadzira ese akajairwa ekupedzisira mill uye akakosha maturusi.Tinogona kuzviita zvinoenderana nemifananidzo yako uye samples.
Q6: Ndingave nehurongwa hwangu hwekushanda?
A6: Ehe, isu tichatumira hurongwa hwekushanda hweodha yako svondo rega rega.Isu tichaongorora uye kuyedza zvese zvinotengeswa kana zvichikuvadza uye zvisipo zvikamu zvisati zvatumirwa.Iyo yakadzama yekuongorora mifananidzo yeodha ichatumirwa kwauri kuti usimbiswe usati watumirwa.
Mhinduro yako ndiyo rukudzo rwedu rwakanyanya, ndapota usazeza kutipa mhinduro yako yakakosha uye isu tinogona kukuita kuti unzwe uine chivimbo kune kambani yedu uye zvigadzirwa.
kana uine dambudziko, pls ndibate
spindle CNC pfuti yekuchera muchina
T2120G Yakadzika Gomba Kuchera uye muchina unobhowa
CNC Combinde BTA uye pfuti yekuchera muchina
TK2125A CNC YAKURU KUNYANYA KUNYANYA KUNENGA DEEPHOLE...
Round bar kuchera gomba rakadzika muchina
TSK2180 CNC HIGH EFFICIENCY DEEPHOLE HONING MAC...